Baarlamaanka Soomaaliya oo cod u qaaday kiiska Qalbi dhagax | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Baarlamaanka Soomaaliya oo cod u qaaday kiiska Qalbi dhagax
Baarlamaanka Soomaaliya oo cod u qaaday kiiska Qalbi dhagax
Guddigii loo xil saaray Baaritaanka Kiiska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo maanta Baarlamaanka ka hor jeediyay Natiijada Baaritaankooda, ayaa qalad ku tilmaamay in muwaadinkaasi loo gacan geliyo dowladda Itoobiya.
Guddiga ayaa sheegay Shuruucda dalka u taalo inaysan meel uga qorneyn in muwaadin Soomaaliyeed lagu wareejiyo dowlad kale, waxaana ay sheegeen inuusan jirin sharci arintaasi qeexaya oo dalka u yaallo.
Gudoomiyaha Guddigaasi Cali Xoosh oo Warbixinta jeedinaayay, ayaa sheegay in Xukuumadda Federal-ka ah ee Soomaaliya ay ku qaldaneyd tallaabada ay ku dhiibtay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo Itoobiya loo gacan galiyay.
Waxa ay sheegeen in Taliska Nabad Sugidda Soomaaliya uu maareeyay Kiiska Qalbi Dhagax, iyadoo uusan la wadaagin madaxda ugu sareysa dalka.
Guddiga ayaa si dadban u sheegay in Taliyahii Hay’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee (NISA) oo xilligaasi ahaa C/laahi Sanbaloolshe uu kaligiis maareeyay arinta Qalbi Dhagax, iyadoo uusan wada tashi xoogan kala wadaagin Xukuumadda Soomaaliya.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay ee Zimbabwe iyo Mugabe oo waqti kordhin yar loo sameeyay
Next articleAkhriso: Nuxurka warbixinta guddiga loo saaray kiiska Qalbi dhagax